Ra?isal wasaare saacid oo soo abaabulay shirka dhamaystirka qorshaha xuquuqda Insaanka Soomaaliya – Radio Daljir
Agoosto 5, 2013 4:49 b 0
Muqdisho, 05 Augst, 2013.. Shalay shir ka dhacay xarunta Madaxtooyada oo ay isugu yimaadeen Xooghayaha Golaha Wasiirada & Baarlamaanka Mudane Calas Maxamuud Jamac Juge, Agaasimayaasha Guud ee Wasaradaha Dowladda, Guddiga KMG Madaxa Bannaan ee Xaqiiqa Raadinta Tacadiyada ka Dhanka ah Xuquuqal Insaanka (Human Rights Task Force) iyo Danjiraha Jamhuriyada Federaalka Soomaaliya u fadhiya Xafiiska Qaramada Midoobay ee Geneva, Mudane Yusuf? Maxamed Ismaaciil Bari-Bari.
Shirkaan ayaa daba socday kulan ay isugu yimaadeen Agaasimayaasha Wasaaradaha iyo labada mas’uul ee kor ku xusan kaas oo dhacay bishii la soo dhaafay 24-keedi iyo mid ku xigay oo isna dhacay 30-kii bishaas dhex marayna Guddiga Xuquuqal Insaanka ee Baarlamaanka (Human Rights Committee of the Parliament) iyo Guddiga KMG ee Madaxa Bannaan ee Xaqiiqa Raadinta Tacadiyada ka Dhanka ah Xuquuqal Insaanka.
?Shirarkaan iyo kuwo kale oo la tashiyo ah waxaay daba socdaan shirkii bishii Maarso 2013 ka dhacay Magaalada Muqdisho oo dhex maray Madaxda sare ee Dowladda iyo? Khabiirka Caalamka ee Madaxa Bannaan oo u qaabilsan u kuur gelida Arrimaha Xuquuqal Insaanka ee Soomaaliya (Independent Expert on the situation of Human Rights in Somalia) Dr. Shamsul Bari.? Kulamadaas ka dib Madaxda sare waxeey go’aansadeen in Dowladda Federaalka Soomaaliya diyaariso Khariidada Geedi Socodka lagu hormarinayo laguna ilaalinayo Xuquuqal Insaanka Muwaadiniinta Soomaaliyeed (Human Rights Road Map for Somalia).
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Xafiiska Qaramada Midoobay ee Geneva ahna khabiir ku xeel dheer Xuquuqul Insaanka,? aayaa war bixin ka siiyey ka qaybgalayaasha shir ka dhacay bishii June 2013 Magaalada Geneva, kaas oo looga arrinsaanayey sidii loo hormarin lahaa loona ilaalin lahaa Xuquuqal Insaanka Muwaadiniinta Soomaaliyeed.
??Bishii June 2013 kalfadhigii ka dhacay Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay, waxaa lagu go?aamiyey in bisha Septembar 2013 la qabto shir looga hadlayo xaalada Xuquuqal Insaanka ka jirta? Soomaaliya. Shirkaasa waxaa warbixin sannadla ah ee ku aadan Soomaaliya ka jeedin doona Khabiirka Madaxa Bannaan ee u qaabilsan Soomaaliya Dr. Shamsul Bari, Madaxda sare ee Dowalada Federaalka ah ee Soomaaliya, Madax ka socota dalalka sida gaarka ah u daneeya Arrimaha Soomaaliya,? Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha QM u qabilsan Somaaliya Danjire Nicholas Kay, Wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Danjire Maxamed Saalax Annadif iyo Madaxda Hay?adaha QM ayaa la filaya inay ka soo qayb galaan shirkaas muhiimka ah.? Madaxda sare ee Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa Golaha u bandhigi doona tubta ugu wanaagsan ee lagu hormarin karo laguna ilaalin karo Xuquuqal Insaanka ee Muwaadiniinta Soomaaliyeed? ayuu yiri Danjire Yusuf Bari-Bari. Waxaa sidoo kale uu? sheegay in Golaha Xuquuqal Insaanka ee Qaramada Midoobey afartii sanaba dal kasta uu marsiiyo imtixaan? ku saleeysan qiimeeynta xaalada? Xuquuqal Insaanka ee dalkaasi ka jirta.
?Dalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysey sanadii 2011 la marsiyey imtixaanka lagu qiimeeynayo xaalada Xuquuqal Insaanka ka jirta Soomaaliya. Wakiilada dalalka eek u jira Golaha Xuquuqal Insaanka ee QM ayaa u? soo bandhigay 155 talooyin.? DFKMG ee Soomaaliya wada tashiyo badan ka dib waxeey si buuxda u aqbashay 151 ka mid ah talooyinkii loo soo jeediyey. Sida uu qorshuhu yahay sanadka 2015 ayeey mar labaad Soomaaliya mari doontaa imtixaanka Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay. Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxaa looga fadhiyaa in ay Golahaas u gudbiso habka ay u dhaqan gelisay 151 talooyin ay Soomaaliya aqbashay.
?Shirka bisha September 2013 ee ka dhici doonaa magaalada Geneva, Madaxda sare ee Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya waxay haystaan fursad qaali ah oo ay ku soo bandhigi karaan qorshe ay u madax banaan yihin oo lagu ilaalinayo laguna hormarinayo Xuquuqal Insaanka Muwaadiniinta Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaay fursad u haystaan? in ay codsadaan iskaashi labo nooc ah.
?1.????? Iskaashi guud lala yeesho Hay?adaha Calaalmiga ah (Multilateral Cooperation)
2.????? Iskaashi labo geesood ah eel ala yeesho Dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya (Bilateral Cooperation).
?Hay?adaha caalamiga ah iyo Dowladaha ka gaabiya iskaashigaas xaq uma yeelan doonaan inay Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya u soo jeediyaan eedaymo ka dhan ah ilaalinta iyo horumarinta Xuquuqal Insaanka ee Soomaaliya.
?Waxaa xusid mudan in laga soo bilaabo sanadkii 2008 Dowladda Soomaaliya waxay ku guulaysatay in Golaha Xuquuqul Insaanka ee QM laga ansixiyo sagaal qarraar, oo? intuba dhigaya in Dowaladda Federaalka ah ee Soomaaliya loo fidiyo iskaashi kor loogu qaadayo tayeeynta Hay?adaha Dowladda, si ay Dowladdu u hormariso una ilaaliso Xuquuqal Insaanka Muwaadiniinta Soomaaliyeed.
?Markii ay soo idlaadan kulamada wada tashiga ah waxaa u qorshaysan Ra?iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) in uu ku marti qaado kulanka khaaska ah ee Golaha Wasiiradda,? kaas oo lagu ansixin doono Khariirada Geedi Socodka ee lagu hormarinayo laguna ilaalinayo Xuquuqal Insaanka Muwaadiniinta Soomaaliyeed (Human Rights Road Map) inay ka soo qayb galaan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sh. Maxamuud, Gudoomiyaha Baarlamaanka Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Danjiraha JFS u fadhiya Xafiiska QM ee Geneva Mudane Yusuf Maxamed Ismaaciil Bari-Bari, Khabiirka? Madaxa Banaan ee Xuquuqul Insaanka Soomaaliya Dr. Shamsul Bari, Xubnaha Bulshada Rayidka ah iyo Wakiilada QM u qaabilsan Xuquuqul Insaanka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho.
Dowladda Kenya oo Afrika ka dalbatay in la xoojyo howgalka AMISOM si loo afjaro ururka Al-shabaab.